Ulwakhiwo lweKhosi yoKwakha nge-ETABS-Imodyuli 5-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ulwakhiwo lweKhosi yoKwakha nge-ETABS -Imodyuli 5
Ulwakhiwo lweKhosi yoKwakha nge-ETABS -Imodyuli 5
Ngale khosi uya kuba nakho ukuphuhlisa iprojekhthi yendlu yokwenene ngeeNdonga zoLwakhiwo lweSakhiwo, usebenzisa esona sixhobo sinamandla kwimarike yesoftware yokubala yolwakhiwo ETABS 17.0.1
Yonke into enxulumene nemimiselo icacisiwe ngokweenkcukacha: iMigaqo yoYilo kunye noKwakhiwa kweZakhiwo zoKwakha iMasonry R-027. kwaye eyokugqibela iya kuthelekiswa neengcebiso ze-ACI318-14 ngokubhekisele kuyilo lodonga lwe-shear.
Baza kufunda ntoni?
Lungiselela iprojekthi yokwakha eyakhiweyo
Imfuno yekhosi okanye eyimfuneko yokuqala?
Umdla kubalo lolwakhiwo lolwakhiwo
Abafundi babaNjineli, iiNjineli ezinamava okanye ezingenamava kunye nee-Architects.
Ikhosi ye-Masonry yoLwakhiwo kunye ne-ETABS-iModyuli yesi-6
IMicrosoft Excel -Ikhosi yenqanaba elisisiseko
Inkqubo yoLwakhiwo lweMasonics nge-ETABS-Imodyuli 4
I-Ansys Workbench 2020 yeKhosi
U-Ansys Workbench 2020 R1 Kwakhona i-AulaGEO izisa isipho esitsha soqeqesho kwi-Ansys Workbench 2020 R1 ...